ကိုလက်စထရောများခြင်းနှင့် ကင်ဆာဖြစ်ခြင်း ကာကွယ်နိုင်ရန် – Healthy Life Journal
Q. အသက် ၄၀ ထဲ ၀င်လာချိန်မှာ သူငယ်ချင်းအများစုက ကိုလက်စထရောတွေ များနေကြပါတယ်။ အဲဒီလိုမဖြစ်အောင် ဘယ်လိုစားသောက်နေထိုင်သင့်ပါသလဲ။
A. အခုမြန်မာပြည်မှာ ကိုလက်စထရောများတာနဲ့ ကင်ဆာတွေ အရမ်းအဖြစ်များပါတယ်။ ကျန်းမာရေးက ဘ၀မှာ အရေးကြီးဆုံးပါ။ မကျန်းမာမှ ဆေးကုမယ့်အစား ကျန်းမာအောင် ကြိုတင်ကာကွယ်ပါ။ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်တွေကတော့ အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး လူတိုင်းလုပ်နိုင်မယ့် တချို့အချက်အလက်တွေပါ။ ဒါတွေလိုက်နာရင် ပိုကောင်းတဲ့ ကျန်းမာရေးဘ၀ရပါမယ်။
နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ကျန်းမာရေးနဲ့အညီ စားသင့်ပါတယ်။ ချွေတာပြီးစားလို့ မကျန်းမာရင် ပြန်ဆေးကုရင် ကုန်မှာဆိုတော့မထူးပါဘူး။ မြန်မာအများစုက ကျန်းမာအောင်မစားဘဲ ချွေတာပြီး မကျန်းမာမှပဲ ဆေးကုချင်ပါတယ်။ အလွန်မှားတဲ့ အယူအဆပါ။ မနက်ခင်းမှာ ထမင်းကြော်စားတာဟာ မကောင်းပါဘူး။ ဆီနဲ့ကြော်တာစားရင် (Transfat) ဖြစ်စေပြီး ကိုလက်စထရော များစေတယ်။ ဆီဆမ်းပြီးစားတာက ကျန်မာရေးနဲ့ ပိုညီညွတ်တယ်။ ဥပမာ – ထမင်းပဲပြုတ်ဆီဆမ်း။
စားသောက်တဲ့အလေ့အကျင့်ကို ချက်ချင်းထက် တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲပြီး ပုံစံသစ်နဲ့ စားသင့်ပါတယ်။ ထမင်းကို နည်းနည်းပဲစားပါ။ လျှော့စားပါ။ စားတဲ့ထမင်းပမာဏထက် ၂ ဆ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကို စားရပါမယ်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်မှာ သြဂဲနစ်စားရင် အကောင်းဆုံးပါ။ သြဂဲနစ်မရနိုင်တော့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကို ဆားရေ ဒါမှမဟုတ် ရှလကာရည်နဲ့ ၁၀ မိနစ်စိမ်ပါ။ ပြီးရင် ရေနွေးဖျောပြီး စားနိုင်ပါတယ်။
အစားအသောက်ကို အချိန်ယူစားပြီး အကြိမ်များများနဲ့ နည်းနည်းစီ စားသင့်ပါတယ်။ (တစ်နေ့ ၆ ကြိမ်)။ ဗိုက်ကိုပြည့်သွားအောင် မစားပါနဲ့။ အသီးအတွက် ချန်ထားပါ။
တစ်နေ့ကို ရေ ၂ လီတာအနည်းဆုံး သောက်သင့်ပါတယ်။
မနက်မှာ ဒိန်ချဉ်စားပြီး နွားနို့တွေ သောက်သင့်ပါတယ်။
လတ်ဆတ်တဲ့ သစ်သီးဖျော်ရည်ကို အဓိကထား သောက်ကြပါ။
တစ်နှစ်ကို တစ်ခါတော့ ဆေးစစ်ပြီး မတည့်တာတွေ ရှောင်သင့်ပါတယ်။
ကြက်သား၊ ငါး ပိုစားပြီး အနီရောင်အသားတွေကို တတ်နိုင်သမျှ လျှော့စားပါ။
ဟင်းအနှစ်တွေကို အများကြီးမစားသင့်ပါ။ (မစားတာပိုကောင်းပါတယ်)။ အပြုတ်ကို အဓိကစားပါ။
စိတ်အလိုလိုက်ပြီး အများကြီးကို တစ်ခါတရံဆိုပြီး မစားပါနဲ့။ စားသောက်ဆိုင်မှာလည်း လိုသလောက်ပဲမှာပြီး မကုန်ရင် ပါဆယ်ထုပ်ပါ။
ကျန်းမာ၊ သက်ရှည်စွာနေနိုင်ဖို့အတွက် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ ရောဂါတွေကို အစွမ်းကုန် တိုက်ထုတ်နိုင်တဲ့ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေ စားသင့်ပါတယ်။ ဥပမာ-ကြက်သွန်ဖြူ၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ပန်းမုန်လာ၊ စပျစ်သီး။
အအေးဘူးတွေကို တတ်နိုင်သလောက်ရှောင်ပါ။ ရေကအကောင်းဆုံးပါပဲ။
အကင်တွေ အစားများရင် ကင်ဆာဖြစ်ပါတယ်။ (ဥပမာ- ကိုရီးယားအကင်)
•	လမ်းလျှောက်ပါ။ တစ်နေ့ကို ခြေလှမ်း ၈၀၀၀ ကနေ တစ်သောင်းအထိ လျှောက်သင့်ပါတယ်။
•	တတ်နိုင်ရင် Exercise လုပ်ပါ။
•	Stress မများအောင် စိတ်ကိုထားပါ ။
•	ဒါတွေကတော့ လူတိုင်းလိုက်နာနိုင်မယ့် အစားအသောက်အတွက်ပါ။ ပိုပြီးကျန်မာပြီး ကိုလက်စထရောတွေ လျော့လာပါလိမ့်မယ်။
•	မကျန်းမာမှ ပိုက်ဆံကုန်ဆေးကုပြီး အစားအသောက်ရှောင်မလား။ ဒါမှမဟုတ် ကျန်းမာအောင်စားကြမလား။ ဒါကတော့ မိမိရဲ့ ရွေးချယ်မှုပါ။